२०७३ पौष २७ बुधबार १३:२२:००
मेरो भित्रै आत्मादेखि नै लागेको कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नभएको भए आज म नेपाली भएर बाँच्न सक्ने थिइनँ । अहिले हामी स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र नागरिक छौं ।
नेपालमा कुनै बेला यस्तो समय पनि आयो, पृथ्वीनारायण शाहकै शालिकहरु फुटाउन थालिए । नेपालको झण्डा बदल्नुपर्छ भन्न थालियो । पशुपतिनाथको मन्दिर नै परिवर्तन गर्नुपर्छ अर्को राख्नुपर्छ भन्ने खालका कुरा पनि उठे ।
त्यस्तै बेलामा मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निर्णय पारित पनि भयो ।
त्यो निर्णयमा राजा रजौटाका फोटाहरू तुरुन्त हटाउनु भन्ने निर्णय भयो । त्यो निर्णय मेरो अफिसमा पनि आइपुग्यो ।
नेपाली सेनाका देशभर रहेका ब्यारेकमा पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिर कहीँ छैन भने तुरुन्त राख्नु भनेर परिपत्र गरियो ।
त्यसबेला पृथ्वी नारायण शाहले यो देश निर्माणको इतिहास सुरु गरेर नेपाली सेना र नेपाली जनताको अगुवाइ गरेको कुरा कुनै पनि हालतमा बिर्सन मिल्दैन ।
उहाँ त्यसबेला वनारस जाँदा विराज बखतजीले उहाँलाई खुसी पार्नुभएछ ।
फर्केर आएपछि त्यसबेलाको प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर पृथ्वी नारायण शाहले भन्नुभएछ । तर उहाँ पछिको कुरा पनि सोच्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँले सबै भाइ भारदार र जनतासँग बुझेर मात्रै निर्णय गर्छु भनेर हिँड्नुभएछ ।
तर जनताले भनेकै व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले मन नपराए पनि कालु पाँडेलाई अघि सार्नुभयो । त्यो नै प्रजातन्त्रको जग थियो । जनताको कुरा काट्न हुँदैन भन्ने उहाँमा त्यो बेला नै लागेको थियो । यसलाई प्रजातन्त्रको जग मान्नुपर्छ ।
त्यसको साथसाथै केही मुस्लिमलाई सेनामा ल्याउनुभयो । नेपाली सेनाको सुरुवाती समयमा उनीहरुलाई सबै गोलिगट्ठाको जिम्मा दिनुभयो । त्यसको साथसाथै उहाँले गोरखा राज्य र गोरखा सेना भन्नुपर्ने थियो नि, त्यो भन्नुभएन ।
मनमा त्यसबेला पनि चोट नपुगेको होइन तर नेपाली सेना पनि कानुनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले पनि म राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ भनेर हिँडेको हुँ । नेताजीहरुले पनि यो कुरा हो भन्नुहुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा सबैले हो यो राम्रो कुरा हो भन्नुहुन्छ ।
एकपटक वर्तमान राष्ट्रपति एवम् तत्कालीन मन्त्री मेरो अफिसमा आएर यसबारेमा केके कुरा पनि गर्नुभयो ।
लेनिन, स्टालिनको विषयमा कुरा हुँदा उहाँलाई मैले त्यसबेला पनि पृथ्वी नारायण शाहका बारेमा भनेको छु । उहाँले नम्र र भलाद्मी भावमा भन्नुभयो । उहाँ मृदुभाषी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यसबेला नै भन्नुभएको थियो– पृथ्वी नारायण शाहलाई मैले पनि मान्छु ।
पृथ्वी नारायण शाह भविष्य सोच्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको अवस्थामा पनि चार वर्ण ३६ जात भन्नुहुन्थ्यो । सबै भाषा, भाषी, भेग, धर्म, सबै नेपालीलाई एकतावद्ध रुपमा राख्न नेतृत्व त्यसबेला नै गर्नुभएको रहेछ ।
संसारमा जुन देशको पनि राष्ट्रिय पर्व हुन्छ । उहाँको फोटो कागजी नोटहरुमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहँदै आएको छ । नागरिक समूहले आज ठूलो कार्यक्रम गर्दैछ । यो कोही व्यक्तिको होइन, सबैलाई समेट्ने पर्वका रूपमा लिनुपर्छ ।
हामी सबैलाई समेट्ने राष्ट्रिय प्रतीक के त ? हाम्रो स्वाभिमानको प्रतिक के हो त ? उहाँले हिमाल, पहाड र तराई मधेस केही पनि भन्नुभएन । नेपाल सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हो भन्ने अवधारणा ल्याएको हुनाले उहाँलाई एकताको प्रतीकको रूपमा मान्नुपर्छ ।
एकदिन सबै नेतालाई हामीले गल्ती गरेछौं भन्ने लाग्नेछ । अहिले पनि कतिपय नेताले हो हामीले गल्ती गरेछौं भन्नुहुन्छ तर पब्लिकमा बोल्न हिच्किचाउनुभएको छ ।